Arooskii ugu yaabka badnaa dunida oo ka dhacay New York markii ay is guursadeen gabar 12 jir ah iyo oday 65 jir ah - iftineducation.com
Arooskii ugu yaabka badnaa dunida oo ka dhacay New York markii ay is guursadeen gabar 12 jir ah iyo oday 65 jir ah
iftineducation.com – Arooskii ugu yaabka badnaa dunida ayaa ka dhacay Magaalada New York ee dalka Mareykanka kadib markii ay is guursadeen gabar 12 jir ah iyo oday 65 jir ah, ayadoona hadal heynta ugu badan ee New York maanta ay aheyd arintaasi.
Waxaa la soo wariyay in labadani lamaane loo sameeyay aroos cajiib ah oo ka duwan kuwii horey uga dhici jiray Magaalada, waxaana la sheegayaa in inta badan dadka ku dhaqan New York ay kasoo horjeesteen arooskani, balse diidmadooda looma joojin oo arooska waa uu dhacay.
Arinta cajiibka aheyd ee soo jiidatay indhaha caalamka ayaa aheyd in gabadha 12 jirka ah ay ayadu raali ka noqotay oo ay ogolaatay in loo guuriyo odayga 65 jirka ah.
Arooskani ayaa kamid noqonaya arimaha la yaabka leh ee dunida ka dhaca, ayadoona laga hadal hayo imika Magaalada New York iyo guud ahaan Magaalooyinka dalka Mareykanka.
wax ka baro Madaxweynaha ugu Hurdada badan afrika marka shirarka lagu Jiro, Sawiro..
Dhibka ay isku qabaan ragga iyo dumarka